Piriimiyeer Liigii: Tilmaammii Laawuroo torbee kanaa - BBC News Afaan Oromoo
Piriimiyeer Liigii: Tilmaammii Laawuroo torbee kanaa
Maanchistar Siitiin Dilbata dhufu waancaa Piriimiyer Liigii ni gonfatu. Isaan waliin kan taphatan Haadarsifiild garuu bara dhufu Siitii waliin morkachuuf liigicha keessa ni turuu laata kan jedhu gaaffii guddaa dha.
Xiinxalaan keenya Laawuroon shakkii guddaa qaba: ''Haadarsifiild wantoota amma isaan rakkisan fooyyessuu Siitii riikoordii cabsuufi waancaa heddu moo'uuf carraaqu dhaabuuf iddoo rakkisaarra jiru,'' jedha.
Biraayitan fi Maan Yunaayitid
Biraayitan torbee darbe Barniley waliin qixa ba'uunsaanii qabxii 37 akka kuufatan isaan taasiseera, kunis gadi-bu'uurraa akka hafan isaan gargaara. Qabxii dabalataa tokko argachuun ammoo caalaatti mirkaneessa.
Garuu kan taphatan garee tapha xumuraa Waancaa FA'f darban Yunaayitid waliin ta'uunsaa xiqqoo itti ulfeessa.
Sadarkaa 2ffaa irratti xumuruuf carraa guddaa kan qaban Mooriinhoon tapha kana akka salphaatti hin ilaalani. Taphattoonni isaanii tapha xumuraa waancaa Wiimbiley'f filatamuuf sochii gaarii akka agarsiisan barbaadu.
Tilmaammii Laawuroo: 0-2
Istook fi Kiriistaal Paalaas
Leestar Siitii torbee darbe 5-0 erga moo'anii booda Paalaas bakka gaariirra jiru. Yeroo kilabichi qabxii tokko hin qabnetti kan fudhatan Rooy Haadsan, garee kana sadarkaa kanarra kaa'uusaaniitiin leenjisaa cimaa waggaa kanaa ta'uu malu.
Istook gama biraatiin Anfiilditti Liivarpuulirraa qabxii murteessaa argataniiru, akka gadi hin buune kan beekan Paalaasonni sochii laafaa agarsiisu taanaan, Istook waan addaa hojjachuu danda'u.
Tilmaammii Laawuroo: 2-0
Boornimaz fi Siwaansii
Boornimaz torbee darbe Saawuzihaampitaniin moo'amanii turani, ji'oota muraasa darbanittis qabxii gataa turani.
Siwaansiinis torbanoota muraasa darbanitti sochii baayyee gadi-bu'aa agarsiisaa turaniiru. Kana jechuun ammoo gareen lamaanuu haala badaarra akka jiran agarsiisa.
Leestar fi Weesti Haam
Leenjisaan Leestar Kilaawude Piiwul tapha dirree isaaniirratti taasisan kana moo'uun hedduu saan barbaachisa. Amajjii darbe irraa kaasee kana milkeessuu waan hin dandeenyeef. Kunis dhiibbaa irra jiru xiqqeessuufii mala.
Weesti Haam Maan Siitiidhaan yeroo injifatametti jijjiiramee dirree seenuun omaa hojjachuu kan hin dandeenye Andii Kaarool waliin kan wal-dhaban Deeviid Mooyees gama biraatiin, tapha kanarraa qabxii ni barbaadu.
Tilmaammii Laawuroo: 2-1
Waatifoordi fi Niiwukaasil
Waatifoordi tapha Tootanhaam waliin taasisan irratti moo'amanus, sochii mishaa taasisani.
Niiwukaasil ammoo dirree isaaniirratti Weesti Biroomiin moo'amuurra darbee erga qabxii 40 irra ga'uu mirkaneeffatanii booda, bashannanaaf gara qarqara galaanaatti waan deeman fakkaatu.
Weesti Biroom fi Tootanhaam
Weesti Biroom haala gaariirra jiru jedhee dubbachuu baadhus, garuu leenjisaa yeroo jalatti qabxii galmeessisuu itti fufaniiru. Taphattoonni leenjistoota irratti dhiibbaa akka taasisan kan Kilaawude Piiwul irraa ka'uun himaan ture.
Kan Alan Paardiiw hojiirraa ariisise dhiibbaa taphattootaa ta'uutu natti mullata, yoo kun hin taane akkamiin sochii akkasii agarsiisuu eegalani?
Isparsi gama biraatiin sadarkaa 4 keessatti xumuruu waan mirkaneeffatan fakkaatu, tapha kana yoo moo'an ammoo caalaatti.
Eevartan fi Saawuzihaampitan
Saawuzihaampitan erga Sadaasa darbe Eevartaniin 4-1 Seenti Meeriitti moo'anii booda torbee darbe yeroo jalqabaaf Boornimaziin injifatanii jiru. Gara liigii gadiitti bu'uu dhiisuuf falmachaas jiru.
Ganna dhufutti waan Saam Alaardaayis mudaturratti hundaa'uun Eevartanitti jijjiiramni jiraachuu malus, akka Saawuzihaampitan garuu rakkoo cimaa keessa hin jirani.
Tilmaammii Laawuroo: 1-1
Maan Siitii fi Haadarsifiildi
Siitiin Sadaasa darbetti Haadarsifiidi dirree isaaniirratti moo'uuf carraaqqii guddaa itti fudhate, galchiin sa'aatii dhumaa Istarliing hanga lakkaawwamtutti.
Amma garuu kun waan ta'u natti hin fakkaatu, bara dorgommichaa haala gaariin xumuruuf qofadha kan hojjachaa jiran, waan hunda harkatti waan galchaniif.
Tilmaammii Laawuroo: 4-0
Kun tapha Arsen Weengar akka leenjisaa kilabichaatti yeroo dhumaaf Eemireetisitti dhiyaatanidha. Waggoota 22 booda geggeessa bareedaa ta'e ni argatus jedheen yaada.
Barnileey Arsenaalitti cimuu akka malan ni beekna, garuu Weengar tapha kanarraa qabxii gaariis ni argatu jedheen yaada. Sochii badaa agarsiisaa turanus, dirree ofiirratti riikoordii gaarii qabu.
Cheelsii fi Liivarpuul
Cheelsiin ammas Liivarpuuliin qaqqabuun sadarkaa 4 keessa galuu ni danda'u. Haa ta'u malee kun yoo ta'u natti hin mullatu.
Warri diiddiimoo tapha kana yoo moo'amanillee dirree ofiirratti Biraayitaniin moo'uu yoo danda'an galchii hedduudhaan warra cuquliisaa waan caalaniif sadarkaa 4 keessa turu jechuudha.
Chaampiyoonsi Liigii irratti humni baasan Liivarpuul tapha kanarratti akka fedhan kan isaan taasisu ta'uu dhiisuu mala.
Kanaafuu walqixa ba'u jechuufan deema.
Lammileen Itoophiyaa 10 Zaambiyaatti mana murtiitti dhiyaatan
Haadholii dirqiin gudeedamanii ilmoo isaanii guddisuufis carraa dhaban
Dhaabbanni gargaarsaa Tiraamp cufamuufi
Haati mucaashee du'uuf jedhu arguuf eeyyama argatte
Maan Yuunaayitid Joosee Mooriinhoo leenjisummaa irraa gaggeesse
Siidaa Mahaatma Gaandii Yuunivarsitii Gaanaa keessaa jigsan
Cimdooliin maqaa mucaa isaanii Adoolf jedhan hidhaa bu'an